LXDE: Chii icho uye inoiswa sei pane DEBIAN 10 uye MX-Linux 19? | Kubva kuLinux
LXDE Icho chiedza uye chinokurumidza Desktop Nzvimbo, zvakanyanyisa se XFCE y MATE. Vhura LXDE kazhinji ruzivo rwakawanda haruna kuwanda sevamwe. Semuenzaniso, yedu post yekupedzisira tsanangura pamusoro LXDE, zvaive zvinodarika gore rimwe chete rapfuura, maitiro ekuita backup yazvo.
Izvi zvirokwazvo zvakakonzerwa nenyaya yekuti kazhinji kazhinji pane mashoma Kugoverwa kweGNU / Linux izvo zvinosanganisa senge Default Desktop Nharaunda. Naizvozvo, muchinyorwa chino tichanyanya kutarisa Chii? y Unoisa sei?. Kusimbisa, chokwadika, izvozvi DEBIAN GNU / Linux meta-kugovera, mune yazvino ichangopfuura shandurola nhamba 10, kodhi zita Buster. Iyo irowo parizvino hwaro hweiyo kugovera MX-Linux 19 (Yakashata Duckling).
Kududza ruzivo rwepamutemo, zvinotevera zvinogona kuratidzwa:
"LXDE, zvinorevei Lightweight X11 Desktop Nharaunda, iyo inokurumidza uye isingaremi desktop desktop. Iyo yakagadzirirwa kuve inoshandisa mushe uye isina kureruka ichichengeta mashandisirwo ekushandisa mashoma. LXDE inoshandisa shoma RAM uye CPU, ichiri chinhu chakapfuma-desktop. Kusiyana nemamwe madhesiki akabatanidzwa zvakanyanya, LXDE inovavarira kuve modular, kuitira kuti chikamu chimwe nechimwe chigone kushandiswa zvakazvimiririra nehumwe hushoma. Izvi zvinoita kuti porting LXDE kune akasiyana magovaniswa uye mapuratifomu zvive nyore. ". Yepamutemo LXDE Wiki
1 Zvese nezve LXDE
Zvese nezve LXDE
LXDE yakaburitswa zvishoma mugore 2006 naiye Taiwanese musayendisiti wemakomputa Hong Jen Yee Kana wapedza PCManFM, iyo yekutanga desktop module. Ipapo iyo yakazara desktop ye LXDE, nechinangwa chekushandira kuvandudzwa kwe yakaderera simba uye zviwanikwa zvinopedza kugoverwa.
Parizvino kuenda kune iyo 0.8 version (kugadzikana).
LXDE inowanikwa kuburikidza ne zvinyorwa zvepamutemo mune zvakawanda GNU / Linux Distros, senge: DEBIAN, Ubuntu naFedora. Uye vamwe vanounza nekutadza kana ivo vakatarisa kune mashoma-zviwanikwa zvekushandisa zvikwata.
El kunyorera ecosystem chizvarwa ku LXDE Inoumbwa nezvirongwa zvakati wandei, zvinotevera zvichinyanya kuve chiratidzo kana kuzivikanwa. PCManFM (File maneja), Leafpad (Chinyorwa chinyorwa), GPicView (Image Viewer), pakati pevamwe vazhinji.
LXDE Yakagadzirwa mukati GTK + 2. Asi ine yakafanana budiriro inonzi LXQT, iyo yatichataura nezvayo mune imwe posvo.
Cherechedza: LXQT ndiyo Desktop Nzvimbo yazvino inoitwa na Hong Jen Yee nenharaunda yayo yeVagadziri, asi havana kusiya kuvandudzwa kwe LXDEsezvavari kuyedza kuendesa kune iyo GTK + 3 yekuenderana ne iyo Gnome3 Nharaunda. Nekudaro, maitiro avanotakura LXQT ine QT5 uye KDE Mapurani 5 kuzadzikisa kuenderana ne KDE Plasma nharaunda.
Iyo Desktop Nharaunda inokurumidza uye yakaderera kudyiwa. Simba rayo rinogara mukugadzirwa kuva lightweight, shandisa zvishoma CPU uye RAM pane mamwe, uye kubatsirwa iko kushandiswa mune yakaderera-kuita michina.
Iyo inochengetwa ne yepasi rose yekuvandudza nharaunda parizvino iri kushanda kuchengetedza kugadzikana uye kuvimbika kweEnharaunda nekuzadzikisa kwazvinogona kutamira kune GTK + 3.
Inouya ne inobata maziso asi nezvimiro zvetsika.
Ine zvinhu zvakanaka senge mitauro yakawanda-rutsigiro, Kugadzirwa kweyakajairwa hotkeys uye ekuwedzera mabasa senge akabata faira kubhurawuza.
Iye zvino LXDE inotsigirwa ne Linux. Kunyangwe yakaedzwawo pa FreeBSD. Saka inotsigirwa neinenge chero sisitimu yakavakirwa pa Unix.
Izvo hazvitsamire pane chero desktop, ndiko kuti, izvo zvikamu inogona kushandiswa yakazvimiririra yeDesktop Nharaunda pachayo LXDE.
Dhizaini yacho ndeye kugadziridzwa kune zviyero zvinobva ku rosoftware.org.
Iyo haina yayo yega windows maneja, asi inowanzo shandiswa zvakanyanya ne Openbox.
Nheyo yaro ichiri mukati GTK2 asi ine yekuyedza vhezheni ye LXDE maererano ne GTK + 3, Yakagadzirwa nerutsigiro kubva kuboka revashandisi ve Arch (lxde-gtk3).
Iri mukuzara kuzere uye usati wasvika kune yako yekutanga yakura vhezheni (1.0) asi nharaunda yake inokura mazuva ese nekuda kwemabhenefiti ayo makuru akatsiga.
Inokurudzirwa yevashandisi vane huwandu hwepamusoro hwechiitiko kupfuura zvakajairwa, nekuti zvese hazvisi padyo padyo, uye kusvina kugona kwayo zvinoda a rairo yakanaka yeLinux.
Webhusaiti yepamutemo yeLXDE Project
Kwamunogona kuwana zvinoshanda zvikamu zvepamutemo, senge Blog, Wiki uye foramu, pakati pevamwe vazhinji. Izvi zvinotevera zvinongedzo zviripo zvakare kuti zviwedzere ruzivo rwacho LXDE:
Wikipedia wiki paLXDE
Sarudza iyo LXDE Desktop Nzvimbo uye chero chimwe chinhu chinoshandiswa kana seti yemamwe mapakeji.
Cherechedza: Iwe unogona zvakare kumisikidza iyo Desktop Nharaunda yakavakirwa pa LXDE zvirinyore nekutsiva iyo package lxde kubudikidza lxde-core.
Dzorera uye pinda mukati nekusarudza iyo Desktop Nzvimbo LXDE, kuitira kuve neanopfuura imwe Desktop Nzvimbo yakaiswa uye isina kusarudza iyo Login Manager ldxe-session.
Uye rangarira, iyi ndiyo yechishanu posvo yezviteedzana nezve GNU / Linux Desktop Nzvimbo. Izvo zvakapfuura zvaive pamusoro GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon y MATE. Nepo wekupedzisira achange ari anenge LXQT.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" nezvake «Entorno de Escritorio» anozivikanwa nezita rekuti «LXDE», iyo inoonekwa seimwe yeakareruka uye akapusa, senge XFCE, ine yechinyakare dhizaini uye diki uye inopinza seti yekuzvarwa kunyorera, mukati menyika ye «Distribuciones GNU/Linux», ive yekunakidzwa uye yekushandisa, yeiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » LXDE: Chii icho uye inoiswa sei pane DEBIAN 10 uye MX-Linux 19?
Ndine Debian 10 ine LXDE uye XFCE yakaiswa, uye zvinoitika kwandiri kuti iyo nyowani vhezheni yeWPS Office 11.1.0.9080 hofisi suite haina kutanga muLXDE, asi kana iri muXFCE, vhezheni yapfuura yakashanda muLXDE. Pane chero munhu anoziva nezve dambudziko iri uye maitiro ekuripedza?
LXQT: Chii icho uye inoiswa sei pane DEBIAN 10 uye MX-Linux 19?